GNU / Linux | मा पावर खपत कम गर्न प्याच लिनक्सबाट
को एक विकासकर्ता रातो टोपी का लागि प्याच सिर्जना गरेको छ कर्नेल de लिनक्स जसले यस ओएसको साथ स्थापित उपकरणहरूको ब्याट्री खपत कम गर्दछ। र स्पष्टतः यसले धेरै राम्रो नतीजाहरु दिएको छ।
समस्या संस्करण को रूप मा थियो २.2.6.38..XNUMX कर्नेलको, यो अक्षम थियो - म किन बुझ्दिन - पूर्वनिर्धारित मोड्युल द्वारा सक्रिय राज्य शक्ति व्यवस्थापन जो ऊर्जा खपत कम गर्न को लागी यसको कार्यहरु बीच छ।
यस समाचारका लागि प्याच र जानकारी यसैले लिइएको हो HumanOS ब्लग। योसँग कोड को about० लाईनहरु छन् र हामी यसलाई देख्न सक्छौं यो लिङ्क। यो धेरै नै सम्भव छ कि यो संस्करणको प्याकेजि onमा देखा पर्नेछ २.3.2..XNUMX कर्नेलको हुनसक्छ हामी यसलाई देख्ने छौं Ubuntu 12.04 LTS वा २०१२ को शुरुमा रिलीज मितिहरूको साथमा अन्य वितरणहरू।
पाठ्यक्रमको सबैभन्दा बढी फाइदा भनेको मोबाइल उपकरण, ल्यापटप, नेटबुक र अन्यको प्रयोगकर्ताहरू हुन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » GNU / Linux मा पावर खपत कम गर्न प्याच
जानकारी को लागी धन्यवाद! आर्च को लागी अगाडि हेर्दै!
चाँडै (सायद हप्ताहरू) हामी यसलाई आर्चमा रमाइलो गर्न सक्नेछौं, साथै कुनै अरू डिस्ट्रोमा जुन आरआर छ 😀
वास्तवमा प्याच पहिले नै प्रयोग गर्न सक्दछ।
ठिक छ भने मात्र यो प्याच लागू गर्न बाँकी छ। यसको लागि उनीहरूसँग कर्नेल कोड हुनुपर्दछ, यसको मूलमा खडा हुनुहोस् र त्यसपछि प्याच लागू गर्नुहोस् (कति शान्त हु, हामी कर्नेल परिमार्जन गर्दैछौं, हामी पुरुषका कार्यहरू गर्दैछौं, हे)।
यो प्याच Git को प्रयोग गरेर उत्पन्न गरिएको थियो, git लागू कमाण्डको साथ तपाईले कोड प्याच गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सँधै प्याच कमाण्ड प्रयोग गरेको छु, तर यहाँ प्याच लागू गर्न git मा प्रयोग हुने एक तरिकतहरू राख्छु।
ठीक छ यदि तिनीहरूले प्याचलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सफल भए अब तिनीहरूले कर्नेल कम्पाइल गर्नुपर्नेछ, हामीले उबन्टु र डेबियनमा कर्नल कम्पाइल गर्ने बारेमा पोष्ट प्रकाशित गर्‍यौं र कोडेनिन्जामा मनुएल ई। हामीलाई लिनक्स कर्नेल कम्पाइल गर्ने जिज्ञासु कला सिकाउँदछ। जब उनीहरू कठिन काम समाप्त गर्छन्, यो केवल दुई .debs स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ जुन उनीहरूले कम्पाईलको अन्त्यमा प्राप्त गर्नुपर्दछ।
तपाई, केवल तपाई जो एक GUU हुनुहुन्छ तपाईले आफ्नो कपाल बाहिर खेती नगरी यो गर्न सक्नुहुन्छ।
खुशी छुट्टीबाट फर्केर आयो, हाहाहााहा।
हाहाहा म गुरु मान्छे होइन ... म चाहन्छु म हाहा थिएँ। र राम्रो, हामी छुट्टीमा थिएनौं, बरु हामी कडा परिश्रम गर्दै विपरित गरिरहेका थियौं। कल्पना गर्नुहोस् कि त्यो प्राप्त गर्न, हाम्रो हाकिमले मोडेम राउटर हामीबाट लुकाउनुपर्‍यो, किनभने अन्यथा हामी आफैंलाई कम्प्युटरबाट टाढा राख्ने छैन हाहाहा
मार्कोस ब्रेगाडो भन्यो
कस्तो नयाँ! चे तपाईले कर्नेलमा प्याच स्थापना गर्ने सवालमा थोरै कुरा बुझाउन सक्नुहुन्छ, म यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट जानकारी पाउन सक्दिन (मैले प्रबन्धन गर्ने कम्पाइलमा) र मेरो ASUS k52De लाई वास्तवमै यसको आवश्यकता छ!
मार्कोस ब्रेगाडोलाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, अत्यधिक उर्जा उपभोग सत्य हो, सत्य धेरै चोटि विन्डोजमा सुरू गर्न रुचाउँदछ किनकि यसले ब्याट्रीमा पनि :7::30० पावर मार्क गरेको छ र यदि यो फेडोरा वा टकसालमा शुरू भयो भने यसले मलाई बढीमा :4::30० वा tell बताउँदछ। तर मँ रोकिन्छ किनकि मलाई थाहा छ कि हामीसँग प्याच हुनेछौं तर केहि समय पछि यो रेड ह्याटमा जान्छ, र फेडोरामा सुरक्षित हुन्छ, र त्यहाँबाट एससी प्रकाशित भए पछि अन्यमा जान्छ। कि हैन?
यो "सतही" बन्ने मेरो बारी हो: म भर्खरै तपाईंलाई छवि चित्रण गर्न प्रयोग गरेको छविमा बधाई दिन चाहन्छु: साँच्चिकै राम्रो र रमाईलो। बधाई छ !!
हाहाहा धन्यवाद यो फेन्जा आइकन with को साथ dmesg भन्दा बढि केहि छैन
के कोहीले पहिल्यै प्रयास गरिसक्यो? तपाईले कस्तो नतिजा देख्नुभयो?
मैले जुपिटर स्थापना गरें। http://www.jupiterapplet.org/ y
र मैले मेरो उबन्टु ११.१० मा ब्याट्री प्रदर्शन सुधार गरेको छु